Hiditra amin’ny fivoriana ara-potoana faharoa, amin’ity taona 2018 ity ireo parlemantera roa eny anivon’ny Antenimieram-pirenena sy Antenimieran-doholona. Hanomboka ny 16 oktobra izao izany, ary haharitra 60 andro. Araka ny fampitam-baovao, ny solombavambahoaka voafidy tao Ambositra …Tohiny
Tena ara-bakiteny ilay hira hoe “alefao ny propangandy hikaraman’ny bandy”, amin’ izao fotoanan’ny fampielezan-kevitra izao. Sao ny rehetra mieritreritra tokoa fa mandeha ho azy ny fanarahan’ny olona ireny kandidà manatanteraka fampielezan-kevitra ireny, na koa amin’ …Tohiny
Tambajotra matanjaka. Mbola mahazo vahana tanteraka eto amintsika ity tambajotra mpanondrana olona any ivelany ity. Any Sina no matetika manjifa azy ity, ary ny vehivavy no tena lasibatra amin’izany. Vola be tsy latsaky ny 70 …Tohiny
Nivory tany Rosia ny faharoan’ ny volaka oktobra lasa teo ny komity maharitry ny CITES, na ny “fifanarahana ara-barotra iraisam-pirenena mikasika ireo zava-boary sy zava-manan’aina atahorana ho ringana”, nodinihina tamin’izany ilay antsoina hoe « business …Tohiny